Bilaogin-dahatsary iray manolotra fomba fijery lalina amin’ny fomba fiasan’ny politika Japoney · Global Voices teny Malagasy
Bilaogin-dahatsary iray manolotra fomba fijery lalina amin'ny fomba fiasan'ny politika Japoney
Voadika ny 11 Oktobra 2015 12:26 GMT
Tokyo on Fire dia lahatsary bilaogy mivoaka ara-potoana miresaka politika Japoney vokarin'i Tim Langley. Sary avy amin'ny fantsona YouTube.
Raha te hianatra politika japoney iana dia manana fantsona Youtube amin'izany indrindra i Tim Langley.
Tokyo on Fire dia bilaogin-dahatsary fampahafantarana amin'ny teny anglisy manolotra famakafakana lalina momba ny politika japoney.
Tontosain'ny menavazan'ny fampitam-baovao Japoney Tim Langley (@langleyesquire) izay matetika manasa ny mpaneho hevitra amin'ny teny angilisy Michael Cucek, dia miresaka izay zava-mitranga rehetra amin'ny politika Japoney amin'io fotoana io ny Tokyo on Fire toy ny fahavitan'ny fifanarahana TPP [fiaraha-miasan'ny firenena manamorona an'i Pasifika] ka hatrany amin'ny fampandaniana mampiady hevitra ilay volavolan-dalàna vaovao momba ny fiarovana.
Ato amin'ity fizarana ity i Langley sy ny vahininy Cucek ary ny mpampianatra ao amin'ny Oniverisiten'i Kyoto Nancy Snow no mifanakalo hevitra momba ireo antoko mpanohitra ao Japan.
Raha maro dia maro ny famoahana mitatitra amin'ny antsipirihany ny politika japoney avy amin'ny fomba fijery maro dia maro, dia ankavitsiana koa no ahitana ny fomba fiasan'ny rafi-politika japoney amin'ny teny angilisy. Mitolona mafy mamoaka sy mampifanaraka ny zavamisy ao amin'ny politika Japoney ireo famoahana tsy manampahaizana manokana momba izany.
Noho ny faharetan'ny bilaogin-dahatsary ora iray dia malalaka tsara amin'ny famotorotorana an-tsakany sy an-davany ireo lohahevitra sy misoroka ireo voarakitra an-tsaina mahazatra loatra ireo famoahana efa tafapetraka sy tafatombina tsara ry Langley sy ireo namany mpaneho hevitra.
Amin'ny ankapobeny ny Tokyo Fire dia mitatitra amin'ny politika be mpanaraka araka ny fijery amerikanina, tsy ahitana famakafakana lalina avy amin'ny fomba fijerin'ny rariny ara-piarahamonina.
I Langley tenany dia mpisolovava ary mikarama amin'ny fanoloran-kevitra ireo raharaham-bondron'orinasa sy raharaham-bahoaka, sady manana fifandraisana lalina amin'i Japan. Nivoaka tao amin'ny Oniverisiten'i Tohoku nahazo ny diplaoman'ny Lalàna izy ary efa nanao dekàn'ny mpikambana iray ao amin'ny Diet Japoney (parlemanta).